ဒါရိုက်တာ James Gunn ဘက်ကနေပြီး ဖေးမရပ်တည်ချင်ပုံရတဲ့ Chris Pratt နဲ့ Zole Saldana - MoviesFan
ဒါရိုက်တာ James Gunn ဘက်ကနေပြီး ဖေးမရပ်တည်ချင်ပုံရတဲ့ Chris Pratt နဲ့ Zole Saldana
နာမည်ကျော် ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Guardians Of The Galaxy ဇာတ်ကား I နဲ့ II ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ James Gunn ဟာ Guardians Of The Galaxy III ဇာတ်လမ်းကို ဆက်ရိုက်ခွင့် မရှိတော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Walt Disney Studios က ထိပ်သီးအကြီးအကဲတွေဟာ သူ့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းထဲမှာ ဒါရိုက်တာအဖြစ်ကနေ (ရုတ်တရက် ချက်ချင်းဆိုသလို) အလုပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာက တခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ James က သူ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာ Walt Disney Studios ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သိပ်မညီညွတ်တဲ့ ပို့စ်တွေကို မကြာခဏ တင်တတ်တာမို့ ခုလို အရေးယူလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒီလို ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို Walt Disney Studios က Chairman တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Alan Horn က မီဒီယာတချို့နဲ့ တွေ့ရတဲ့အခိုက်မှာ တရားဝင် ဖွင့်ပြောခဲ့တာပါ။
အခုလို ရုတ်တရက် အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ James အတွက် နှစ်ရှည်လများ အတူလက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်လာခဲ့ရတဲ့ GOTG ဇာတ်ကားထဲက သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အဖွဲ့သားအားလုံးဟာ တော်တော်လေးကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားကြတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ဖက်မှာက အလုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Walt Disney Studios က လူကြီးတွေရှိသေးတော့ တချို့တွေဟာ James အတွက် ခံစားရတဲ့ သူတို့ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို သိုသိုဝှက်ဝှက်ပဲ ထားခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ… တချို့ကတော့ သူတို့ခံစားချက်တွေကို ထိန်းမထားနိုင်တော့ဘဲ သူ့ကိုရည်ရွယ်သလိုလို၊ ကိုယ့်ကိုရည်ရွယ်သလိုလို ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ သူတို့ပိုင်ဆိုင်ရာ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ စတေးတပ်တွေ တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ GOTG ဇာတ်ကားထဲက အဓိက သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသား Chris Pratt နဲ့ မင်းသမီး Zole Saldana တို့က ထိပ်ဆုံးက ပါ၀င်ခဲ့ကြပါတယ်။
Chris က အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ James ကို ရည်ရွယ်အားပေးချင်ပုံရပေမယ့် ပေါ်တင်မဟုတ်ဘဲ ကျမ်းစာထဲက စာပိုဒ်လေးတစ်ပိုဒ်ကို သူ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
“ချစ်လှစွာသော ညီအစ်ကိုများနဲ့ ညီအစ်မများတို့… ဒါကို နားလည်ကြလော့။ လူတိုင်းဟာ အလျှင်အမြန် နားထောင်နိုင်ကြပါစေ၊ ဖြည်းညင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်ကြပါစေ၊ ဒေါသထွက်ဖို့လည်း နှေးကွေးပါစေ – JAMES 1: 19”
Zole Saldana ကတော့ သူ့ရင်ထဲရှိရာကို ပွင့်လင်းစွာနဲ့ပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ဒီပိတ်ရက်တွေမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ အရမ်းများတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မ မလိမ်ချင်ပါဘူး။ ဒီအချိန်မှာ အရာအားလုံးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စကားတွေ ပြောမထွက်ခင်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထိန်းချုပ်နေရသလိုပါပဲ။ ကျွန်မဘက်က အားလုံးကို သိစေချင်တာ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ကျွန်မရဲ့ GOTG မိသားစုဝင်အားလုံးကို ကျွန်မ ချစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အမြဲတမ်း အတွက်ပေါ့ရှင်”
အသက် ၅၁ နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ James ဟာ အောင်မြင်တဲ့ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း အခုလို အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အထိ အရေးယူခံလိုက်ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်အပေါ်မှာ စိတ်မကောင်းနေဖြစ်ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Happy Birthday to my friend and filmic life partner @prattprattpratt. Chris, for your birthday this year I’m going to post this photo of you instead of the video I just found on my phone of you eatingabug. You’re welcome. ❤️🐜😋
တကယ်တော့ James ဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်တဲ့ စရိုက်ရှိလို့ အဲဒီလို စတေးတပ်တွေကို သူ့ Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ခဲ့တာလို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွေမှာရော၊ အခုတလောမှာရော သူတင်ခဲ့တဲ့ စတေးတပ်တော်တော်များများဟာ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းနည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ ညစ်ညမ်းကြမ်းတမ်းသလို ရှိနေခဲ့တာမို့ ခုလိုအရေးယူခြင်း ခံလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Walt Disney Studios ဆိုတာက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေကို အဓိကပစ်မှတ်အဖြစ်ထားပြီး ရှင်သန်နေခဲ့ရတာမျိုးပဲ မဟုတ်လား။
Previous Post: ဆန်းဆန်းပြားပြား ရိုက်ချက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ Aquaman ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး
Next Post: သရုပ်ဆောင် အပြောင်းအလဲတချို့နဲ့ The Crown ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ Season အသစ်